Barcelona oo hoggaanka horyaalka La Liga si ku meel gaar ah u qabtay kaddib markii ay Atletico Madrid ku soo garaacday Vicente Calderon… + SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo hoggaanka horyaalka La Liga si ku meel gaar ah u qabtay kaddib markii ay Atletico Madrid ku soo garaacday Vicente Calderon… + SAWIRRO
Haaruun Yuusuf February 26, 2017
(Madrid) 26 Feb 2017 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si ku meel gaar ah u qabtay hoggaanka horyaalka La Ligaha Spain, kaddib markii ay garoonka Vicente Calderon ku soo garaacday Atletico Madrid.
Qeybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay kooxda Barcelona ayaa goolka hore la timid waxaana u dhaliyey 64’daqiiqo Rafinha, kaddib markii uu si wacan u dhammaystiray kubbad uu goolasha ku laaday Suarez oo ku dhacday mid ka mid ah xiddigaha Atletico, Barcelona ayaana kulanka ku hoggaamisay 1-0.
Atletico Madrid ayaa la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey 70’daqiiqo Diego Godin, kaddib markii uu madaxeeyey laad xor ah oo Koke uu ka soo qaaday meel u dhow halka koornada laga soo tuuro, kulanka ayaana sidaa ku noqday barbaro 1-1.
Dhammaadkii ciyaarta ayaa goolka ay guusha ku qaateen Barcelona waxaa u gacan galiyey xiddigooda Lionel Messi, kaddib markii uu gool ugu shubay 87’daqiiqo, kulankii ka dhacay garoonka Vicente Calderon ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay ku badisay Barca.
Kooxda Barcelona ayaa hadda si ku meel gaar ah u sii hayn doonta hoggaanka horyaalka La Liga iyadoo 2-dhibcood kaga haysa Real Madrid oo caawa ciyaaraysa.
Real Madrid ayaa caawa la ciyaari doonta Villarreal oo ay marti u noqon doonto, haddii ay kulankaas adkaatana waxa ay dib ugu soo laaban doontaa hoggaanka horyaalka La Liga.
"Ma aanaan xaqiijin ku guulaysiga horyaalka" - Fabregas
Man United oo markeedii shanaad ku guuleystay League Cup, kaddib markii ay garoonka Wembley ku garaacday kooxda Southampton… + SAWIRRO